Ny 28 novambra 2018 no nivoaka ny vokam-pifidianana izay ho filoham-pirenena fihodinana voalohany, dia ny 28 febroary 2019 izany no fetr'andro farany ametrahana izany tatitra ara-bolan'ny kandida izany, ho an'ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana voalohany.
Hatreto, raha ny loharanom-baovao azo, dia 11 amin'ireo kandida 36 ihany no nametraka izany tatitra ara-bola izany.
Aorian'izay moa dia tokony hilaza am-pahibemaso ny tatitra ireo mpikambana ao anatin'ity vaomiera ity.
Misy mpitsara 3 sy expert comptable 2 moa no ao anatin'ity vaomiera ity, izay maharitra 5 taona ny fotoam-piasany.
Ny lalàna moa tsy dia mazava loatra, na ho angady tsy mahatapa-kahitra izy ireo na tsia, atao ahoana ireo tsy nanao tatitra sy mangaraharaha ny vola nampiasainy tamin'ny fampielezan-kevitra, raha nisy tsy mazava ihany koa dia iza no hitsara ny raharaha, na mety nisy famotsiam-bola, na nisy ny tambiny amin'ny harem-pirenena, satria dia voararan'ny lalàna ny fampiasam-bolan'ireo firenena vahiny hamatsiana ny kandida iray.
Aiza no mety hifandraisan'ity vaomiera ity sy ny Bianco ary ny Samifin, sy ny fitsarana.
Andrasana izany ny tatitra ataon'ity vaomiera fanarahamaso ny famatsiam-bola ny fiainana ara-politika ity.